Wet Wipes Factory - China Wipes Wipes Manufacturers, Ndị na-eweta ya
Arlkpụrụ pel nwere ike wepu ihu nhicha ahụ
Nnukwu owu na pee peulu. Thicken banyere 87%.
Skin-enyi na enyi na ala, adịghị mfe ịdapụ.
3D ederede pel, nhicha dị irè karị.
Mmiri dị mma nke ọma, dị mfe ihichapụ mmiri karịrị akarị, mmiri mmịpụ nwere ike ịdị elu dị ka 30ml.